6-Qodob Oo Ragga Ku Qasabta In Ay Haweenka Khiyaanaan!! - iftineducation.com
iftineducation.com – Inkastoo khiyaanada aysan wanaagsaneyn hadana waxaa jira dhowr qodob oo ninka ragga ku qasbeysa in uu sameeyo , waxa ayna taasi ka dhalineysaa dhibaatooyin ka yimid dhanka haweeneyda waxa ayna taasi keeneysa in ninka uu ku dhaco khiyaano qoyseed(Naag Kale Xirto Qarsoodi).
1-In Haweeneyda U Aabo Yeelin Ninka: sababta ugu horeysa ee ninku ku mar-marsiyoodo ayaa ah in haweeneyda uusan ka helin u aabo yeelid oo maxaa yeelay caruurta iyo guriga ay siisaa ihtimaam ka weyn kan ninka ay siiso , waxa ayna taasi khiyaano qoysdeed.
2-Xanaaqaada Joogtada Ah: sababaha kale ee ninka ku qasbeysa khiyaanada ayaa ah xanaaqaada joogtada ah , hadii hal arin yar isku maan dhaaftaan waxaad bilabeysa qaylo adiga oo codka kor u qaadaya , mana siineysid fursad uu ku hadlo oo uu qiil kuugu sameeyo waxa ku qasbay in in uu qaladkaas kaa galo . ogaaw ragaa wa neceb yihiin haweeneyda codka dheer xiliga is faham la`aanto dhacdao.
3-In Aad Isaga Dhibsato: waxaa laga yaabaa in aad tahay mid ka mid ah haweenka sida weyn nadaafada iyo hagaagsanaanta u jecel oo aad neceb tahay alaabta iyo dharka meelaha daadsan , halka ninkaadana uusan awoodin in marka u dharkiisa iska badalayo si wacan u hagaajiyo oo laga yaabo in meel uu isaga tuuro markas ayaadna adna bilaabeysa qilaaf iyo canaan ogaaw waa uu ku dhibsanayaa.
4-In Aad Daryeelin Nafsadaada: waxaa iska dabiici ah in ninku uu aad u jecel yahay in uu arko xabiibtiisa oo mar waliba aad u qurxoonsi uu ugu faano , waxa uuna markas jecleestaa in uu arko adiga oo marba nooc ah , hadii intaas uu ka waayo indhaha ayuu kaa sii jeedsanayaa .
5-Dalabaadkaada Badan: Mararka qaar dalabaadka badan waxaa laga yaabaa in wax lala yaabo noqdaan , waxa ayna taasi keeneysa in xabiibkaada xanaaqo oo day-daydo qof kale haddii uusan awood u laheyn dalabaadkaada badan .
6- Ganuunacaada Badan: Ragga waa ugu neceb yihiin arintaan , waxa uuna raadsanayaa mid kale oo iyada uu u sheegto dhibatooyinkiisa maalmeed ee qabsada .
Waa Inoo Muhiim Aragtidaada Ku Aadan Qodobadaan .